ပန်ဒိုရာ: ကောင်းကင်များ၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိ ၂၀၁၀
ကိုရင်ညိန်းကိုရော၊ ပြန်တင်ပေးတဲ့ မပန်ဒိုရာ နဲ့ ကိုဆောင်းယွန်းလ ကိုရော၊ ကျေးဇူးပါ ခင်ဗျား။
မမပန် --- ကဗျာစာအုပ်ဖတ်ချင်တာ download ဆွဲလို့မရဘူး။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
It frequently amazes me specifically how web site owners for instance your self can find enough time as well as the commitment to carry on creating good blog posts. Your site isgreat and 1 of my ought to read internet sites. I just had to thank you.